Iprofayile yeNkampani | IChengdu GUBT yeShishini Co, Ltd.
Ngo-1990, i-GUBT yasekwa ukuba isebenze kwimarike yehlabathi ngokubonelela ngesinxibo se-crusher kunye neenxalenye zezixhobo eziphambili zokutyumza kunye nokuhlola ngamaxabiso okhuphiswano kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu. Kumandla esiseko esikhulu sokwenza imveliso kumazantsi-ntshona e-China, oomatshini abahamba phambili kwezemveliso kunye nezixhobo, iinjineli ezinamava kunye namava, kunye neqela lokuthengisa eliqaqambileyo eliqeqeshwe kakuhle, i-GUBT ibonelela ngenkxaso enamandla kunye nesiqinisekiso sokunciphisa iindleko, ukwandisa ukubakho kweendawo, ukunciphisa ixesha lokuphumla, kunye neenkonzo ezigqwesileyo emva kokuthengisa. Ngokugxila ekuyileni umgangatho, ukusebenza kweendleko kunye nokwoneliseka kwabathengi, kunye nomnqweno wokuqhubeka nokubonelela abathengi ngeyona mveliso intle, i-GUBT iyaqhubeka nokukhula ngamandla kwaye iphumelele igama elihle kwicryry nakwimveliso yezemigodi.
Emva kweminyaka engama-30 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuqokelela, i-GUBT inesakhono sokuvelisa iindawo ezisemgangathweni zeCone Crusher, iJaw Crusher, i-HSI, kunye noomatshini beVSI, kodwa ikwenzile iimveliso ezithile. Ngolwazi olupheleleyo kunye nesifundo esinzulu soomatshini beCrusher, i-GUBT inokubonelela ngenkxaso kunye noncedo lobuchwephesha kubathengi ukuba bakhethe ezona mveliso zifanelekileyo kwiimeko ezahlukeneyo. Ukunceda ngentliziyo iphela wonke umthengi, usebenze nabo, kwaye usombulule iingxaki ngokukhawuleza yinjongo yethu rhoqo. Ngokuzithemba nangokunyaniseka, i-GUBT ihlala iliqabane lakho elithembekileyo nelinomdla.
Baza, Custom kunye machining
IsiNgesi: Mn13Cr2, Mn17Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr3…
IMartensite: Cr24, Cr27Mo1, Cr27Mo2, Cr29Mo1…
Abanye: ZG200 - 400, Q235, HAROX, WC YG6, YG8, YG6X YG8X
• IiSolidworks, UG, CAXA, CAD
I-CPSS (Inkqubo yoLungiso lweNkqubo yokuLingisa)
• IPMS, iSMS
• Iziko le-4 leetoni ezi-4 zokungenisa iziko
• I-2-ton ye-2-frequency frequency induction
• Ubunzima bekhonkco ye-cone ye-4.5 yeetoni / iiPC
• Ubunzima obukhulu beplate yomhlathi iitoni ezi-5 / iiPC
• Zimbini ii-3.4 * 2.3 * 1.8 zeMitha Igumbi lokucoca ubushushu ngombane
• Inye i-2.2 * 1.2 * 1 yeMitha Igumbi lokucoca ubushushu ngombane
• I-lathe emibini ethe nkqo eyi-1.25 yeemitha
• I-lathe ethe nkqo yeemitha ezi-1.6
• Itheyiphu ethe nkqo yeemitha ezi-2
• Ilithe ethe nkqo yeemitha ezi-2,5
• Ilitha enye ethe nkqo yeemitha eziyi-3.15
• Iplani yokugaya enye ye-2 * 6 yeemitha
• 1 iseti ye-1250 yeoyile yoxinzelelo lweoli edadayo
• Iseti e-1 yomatshini wokuqhumisa onqunyanyisiweyo
• I-OBLF yokufunda ngokuthe ngqo i-spectrometer.
• Umvavanyi we-Metallographic.
• Izixhobo zokuhlola ezingena ngaphakathi.
• Ukuqina kobunzima.
• Ithemometha yomzimba oshushu.
• Ithemometha enobushushu.
• Izixhobo zobukhulu